COVID-19 : Tsy ho sitrana amin’ny fampiasana fanafody ratsy izany ianao · Global Voices teny Malagasy
Nankaiza ny famatsiam-bola COVID-19 avy amin'ny andrim-panjakana ara-bola iraisampirenena?
Voadika ny 31 Janoary 2022 19:31 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Italiano, عربي, Ελληνικά, українська, Español, English
Hetsika vonjy maika amin'ny COVID-19, Madartek, Basabo, Dhaka. Sary avy amin'ny Flickr avy amin'ny UN Women Asia and The Pacific . CC BY-BY-NC-ND 2.0.
Jocelyn Modello, Nadeen Madkour sy Siddharth Akali no niara-nanoratra azy ity.
Manomboka ny taona 2022 tamin'ny fiakaran'ny tranga Omicron teto amin'izao tontolo izao isika. Roa taona lasa izay no nanambaran'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana fa mampihotakotaka amin'ny fahasalamana amin'ny sehatra iraisampirenena ny coronavirus. Ary mbola maro ny fanontaniana maika amin'ny fomba iarovantsika ny tenantsika amin'ny valan'areti-mifindra, sy hahazoana fanasitranana: Iza no hamatsy vola? Inona no handaniana azy ireny? Ahoana no hahazoantsika antoka fa hipaka any amin'ireo izay mila izany indrindra izy ireny?
Nametraka ny tenan'izy ireo ho mpiantsehatra fototra ho fanarenana amin'ny laoniny manerantany ny toekarena sy ny sosialy hialana amin'ny fiantraikan'ny areti-mifindra ireo andrim-panjakana ara-bola iraisam-pirenena (IFI), toa ny Banky Iraisam-pirenena, ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena, sy ireo banky fampandrosoana isam-paritra. Tamin'ny taona 2020, rehefa nanomboka nanenika an'izao tontolo izao ny onjan'ny coronavirus voalohany, dia nanentana ireo firenena handany sy hindrana araka izay azo atao ireo manam-pahaizana ara-toekarena ireo. Nohafohezin'ny IFI ny lisitry ny famoaham-bolany mba hamahana ity fitakiana maika ity, ary nesorin’izy ireo na tamin'ny fomba ofisialy na tsia ny maro tamin'ny fitakian'izy ireo momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy sosialy.
Efa nanome volam-bahoaka an'arivony tapitrisa hiatrehana ny aretimandringana, hampiroboroboana ny endrika tsara amin'ny famatsiam-bola ho an'ny seha-bahoaka (fanjakana) sy izay vondrona miatrika fanilikilihana ireo andrim-panjakana ireo. Na izany aza, mipoitra avy any amin'ny vondrom-piarahamonina ifotony ny fitantarana hafa.
Hatramin'ny fiandohan'ny areti-mifindra, mitaky fomba fiasa mifototra amin'ny zon'olombelona avy amin'ny IFI ny fiarahamonim-pirenena eran'izao tontolo izao. Naneho ahiahy momba ny loza ateraky ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tafahoatra, ​​ny fihenan'ny sehatra ho an'ny fandraisana anjara ara-demaokratika, ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fanalefahana ny fenitra ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy, ny kolikoly ary ny trosa mitombo ireo mpiasan'ny fahasalamana, mpanao gazety sy ireo hafa voakasika mivantana amin'ny fiatrehan'ny IFI ny COVID-19. Ankehitriny, mitombo ny porofo fa maro amin'ireo risika ireo no efa tanteraka.
Misy ny ahiahy amin'ny tsy fahampian'ny mangarahara amin'ny fomba nandaniana ny volan'ny IFI sy ny fiantraikan'izany teo amin'ny vondrom-piarahamonina ifotony. Na izany aza, nisy andiana fanadihadiana tranga teo amin'ny sehatra nasionaly notontosain'ireo mpikambana sy mpiara-miombon'antoka amin'ny Coalition for Human Rights in Development, izay niezaka nikaroka lalina, nitady ny faktiora ary nanombantombana ny fiantraikany sy ny vokatra azo. Mandrakitra ireo lesoka maro amin'ny fiatrehana valan'aretina vatsian'ny IFI ny “Missing Receipts” (Faktiora tsy hita) — fijerena ankapobe vaovao iaraha-miasa amin'ireo tatitra nasionaly sy maneran-tany — ary maneho ahiahy fatratra tamin'ny fomba namatsian'ny IFI ny fiatrehana ny krizy mandeha amin'izao fotoana izao sy ny hamehana manerantany.
Pikantsary avy amin'ny taitry ny ‘Missing Receipts,’ nahazoana alalana.
Napongatry ny fikarohana ny fampidirana olana tahaka ny kolikoly, ny kapitalisma ary ny fanilihana ireo izay tena nila fanohanana mafy indrindra. Matetika voahilika amin'ny famolavolana ny fandaharan'asa tohanan'ny IFI, sy ny fahazoana tombontsoa amin'izany koa ireo vehivavy, ny vazimba teratany, ny mponina kely fidiram-boila, ny olona manana fahasembanana, sy ireo mpiasan'ny fitsaboana.
Betsaka amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana, kely fidiram-bola sy antonony ary efa nozanahana no efa marefo hatry ny nahaterahany avy amin'ny fanoratam-panafody neo-liberaly. Efa ampolony taona maro ny IFI no nandroso ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny trosa, ny toekarena mifototra amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny fanomezana ny servisy fototra hotantanin'ny tsy miankina ary ny fahalefahan'ny tsenan'ny asa. Niteraka fisalasalana teo amin'ny sehatrasa ara-panjakana, ny fanafoanana ny fandaharan'asa fiarovana ara-tsosialy, ary ny fahazoana vondron'orinasa izany. Tsy nandray andraikitra tamin'ireny fihetsika ireny sy ny fahantrana sy ny tsy fitoviana naterak'izany ny IFIs. Ary tsy nanova ny fiatrehan-dry zareo ny areti-mandrigana ihany koa. Nataon'ny IFI ho laharam-pahamehana kosa ny fampiroboroboana ny “sehatra tsy miankina aloha”, izay mifantoka amin'ny fampihoirana ny fampiasam-bola tsy miankina manoloana ny fanohanana ny firenena hanangana indray ny faharetana/fizakàna ao anaty fotoana maharitra.
Namoaka vola tsy toko tsy forohana ho ampahany amin'ny fiatrehana ny areti-mifindra ny IFIs: Nahita tetikasa 1.500 farafaharatsiny fantatra fa mitentina 160 miliara dolara avy amin'ny famatsiam-bola navoakan'ny banky fampandrosoana miisa 15 ny Early Warning System- rafitra fampitandremana mialoha (EWS) mpanara-maso ny COVID-19 an'ny fiarahamonim-pirenena. Saingy mampiseho ny EWS fa ny vola lany amin'ny tombontsoa mivantana ho an'ny vahoaka dia ambany lavitra noho ny an'ny sehatra tsy miankina. Ary na dia efa nalefa tany amin'ny firenena aza ny ankamaroan'ny fanohanan'ny IFI fa tsy tany amin'ny orinasa, dia tsy izany no tantara feno, satria ny vola lasa tany amin'ny sehatry ny fanjakana dia nalefa tany amin'ny vondron'orinasa lehibe.
Tokony hampiditra torohay toy izany avy eny ifotony sy avy amin'ny mpiara-dia aminy momba ny tena fiantraikan'ny famatsiam-bolan'ny IFIs mandritra ny areti-mifindra ny resaka politika avo lenta famahana ny krizy, ny fampandrosoana ary ny firafitra ankapoben'ny fitantanam-bola.
Tamin'ny taona 2020, nampahatsiahy antsika ilay mpanoratra sady mpikatroka Arunhati Roy fa “ara-tantara, nanery ny olombelona hisaraka amin'ny lasa ireo areti-mandringana ary mandray izao tontolo izao ho vaovao.” Nanolo-kevitra izy fa vavahadibe ny areti-mifindra Coronavirus, ary afaka misafidy ny fomba handehanantsika eo, sy ny karazana tontolo tiantsika handehanana isika.
Ankehitriny, satria manomboka miatrika ny fiantraika maharitra amin'ny areti-mifindra ny firenena, olona an-tapitrisany maro miaina anaty fahantrana, miampy tsy fitoviana, ary krizy ara-toekarena sy trosa mitombo ary onja vaovaon'ny COVID-19 mandeha vaovao hatrany, maro no manontany hoe: Nankaiza ny vola avy amin'ny IFIs? Ahoana ny fomba andoavan'ny governemantatsika ireo adidy trosa ireo? Inona no fandaharan'asa ara-tsosialy ho tapahana atao takalo? Misy fomba tsara kokoa ve hanalefahana ny krizy? Fampandrosoana lovainjafy ve izany?
Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo, mila mampiseho faktiora ny IFIs. Isika, vahoaka, dia mila mahita izay nandehanan'ny vola sy ny fiantraikan'izany. Mila ny IFIs ihany koa isika mba hamaha ireo tetikasa izay nanilika ireo vondrona natao an-kilabao, izay nandaniana ny vola, na nanimbana ny zavamananaina sy ny planeta. Tsy maintsy misy ftamberin'andraikitra goavana. Tsy maintsy mitaky amin'ny IFIs mba hampiseho ny faktiora alohan'ny hanomezana azy ireo andraikitra lehibe kokoa amin'ny areti-mifindra sy ny fanarenana ny governemanta, ny akademika sy ny Forum politika avo lenta.
Raha mameno ny randram-baovao ny kinova Omicron, isika, amin'ny maha-fiaraha-monina sivily antsika, kosa, dia tsy maintsy mahatsiaro fa mbola misokatra ny vavahadin'ny areti-mandringana. Azontsika atao ny misafidy ny handeha amin'izany, mitaritarika ny sisan'ireo fatin-kevitry ny andrim-panjakana iraisampirenena ara-bola izay mampitombo indray ny imperialisma ara-toekarena, ny fanilihana ny vehivavy sy ny krizy ara-tontolo iainana. Na afaka mandeha am-pahasahiana isika, miaraka amin'ny fitiavana sy ny fahalalahan-tanana, vonona ny haka sary an-tsaina sy hiady ho an'ny tontolo hafa tarihin'ny vondrom-piarahamonina ny andrim-panjakana manome fampandrosoana sy famatsiam-bola amin'ny krizy, demaokratika, ara-drariny ary mampihatra fomba mifototra amin'ny zon'olombelona.